Take कुञ्जीबाट अपवादात्मक ईमेल मार्केटिंगमा Take टेक-अवेज Martech Zone
Take कुञ्जीबाट अपवादात्मक ईमेल मार्केटिंगमा Take टेक-अवेज
सोमबार, अप्रिल 2, 2012 शनिबार, अक्टोबर 25, 2014 Lavon मन्दिर
यस अनुसार २०१२ मार्केटिंगशर्पा बेन्चमार्क सर्वेक्षणधेरै कम्पनीहरूले २०१२ मा their०% भन्दा बढि आफ्नो इ-मेल बजेट बढाउने सम्भावना छ। यद्यपि डिलिभराले पत्ता लगाईरहेको छ कि अधिकांश कम्पनीहरूले अझै ईमेलको समान मौलिक रणनीतिहरूको साथ संघर्ष गरिरहेका छन् - सूची निर्माण, सामग्री, एकीकरण, डिजाइन, इत्यादि।
के सुधार गर्न आवश्यक छ र के गर्दैन मा स्पष्ट फोकस बिना तपाईंको ईमेल बजेट वृद्धि नगर्नुहोस्। मौलिक मा ध्यान केन्द्रित गर्न समय लिनुहोस्; यो यी आधारभूत अवधारणा हो जसले तपाईंको ईमेल मार्केटिंग प्रोग्रामलाई असाधारण बनाउँदछ। भर्खरै, डिलिभ्राले प्रवृत्ति, तथ्या .्क र सिफारिसहरू प्रकाशित गरे। तल take टेक-एवेज छन्:
डाटामा आधारित सामग्री सिर्जना गर्नुहोस्। प्रासंगिक सामग्री सिर्जना गर्नु ईमेल मार्केटरहरूका लागि चुनौती हुनसक्दछ। सामग्रीलाई सकेसम्म सान्दर्भिक बनाउनको लागि तपाईंको दर्शकहरूको बारेमा लगातार डाटा स collect्कलन गर्नुहोस्। एक सर्वेक्षण वा प्राथमिकता केन्द्रमा सोधेर तपाइँको दर्शक के सुन्न चाहन्छ भनेर फेला पार्नुहोस्।
विभाजनले तपाईंलाई प्रतिस्पर्धामा एक धार दिन्छ। मा मार्केटिंगशर्पा २०१२ ईमेल मार्केटिंग बेन्चमार्क सर्वेक्षण, यसले 95%% कम्पनीहरूले सूची विभाजन सुधार गर्न आवश्यक रहेको बतायो। पछाडि नछोड्नुहोस् - अब तपाइँको विभाजन को सही मा केन्द्रित शुरू!
मोबाइलको लागि डिजाइन, अवधि। समान रिपोर्ट अनुसार, mar 58% ईमेल मार्केटरहरूले स्मार्टफोनमा ठीकसँग रेन्डर गर्न ईमेल डिजाइन गर्दैनन्। स्मार्टफोन अधिक लोकप्रिय हुँदै गइरहेका छन्, त्यसोभए तपाईं किन यस कुरालाई ध्यानमा राखेर ईमेलहरू डिजाईन गर्नुहुन्न?
टैग: सामग्री मार्केटिङतथ्याङ्कडिलिभ्राइमेल मार्केटिङमार्केटिंग शेर्पामोबाइल र ट्याब्लेट मार्केटिंगविभाजनरुझान
आसन्न मोबाइल डाटा स्पेक्ट्रम कमी
एक सफल बिक्री प्रस्ताव को5तत्वहरु